Walaal Soo caawi Haddii Alle wax ku siiyay Aabe labada Lugood ka go’an oo leh Muqdisho ku dhibaataysan. - Latest News Updates
Walaal Soo caawi Haddii Alle wax ku siiyay Aabe labada Lugood ka go’an oo leh Muqdisho ku dhibaataysan.
Cali Xuseen Kudan, waa Aabe dhalay 7-caruur ah, isla markaasina dagaaladii ku waayay labadiisa Lugood, iyadoo ay u sii dheer tahay inuusan haysan wax ka kaalmeeya qoyskiisa, mana ahan nin shaqeyn kara, xaalkiisa waa mid aad u liita.
Maadaama Bisha Ramadaan lagu jiro ee Barakaysan Waxaa laga codsanayaa dadka uu Alle wax siiyay in ninkaasi labada lugood ka go’an soo caawiyaan, si uu helo Afur isaga iyo caruurtiisa.
Haddaba mar aanu wax ka waydiinay xaaladiisa noololeed ayuu sheegay mar haddii ay ka go’an yihiin labadiisa lugood ee uu ku socon lahaa ay ku adag tahay xaaladda qoyska uu aabaha u yahay, waxaa Bulshada Muslimiinta Caalamka laga codsanayaa inay soo gar gaaran ninkaan Curyaanka ah.
Ka sokow curyaannimada soo wajahday Cali Xuseen Kudan, ayaa wuxuu sheegay inuu ka codsanayo Hay’adaha samafalka, shacabka Muslimiinta ah, ganacsatada, Jaaliyadaha Soomaalida ee dibadaha ku dhaqan iyo ruux kasta oo leh damiir bani’aaminimo inay la soo gaaraan gurmad samatabixin oo dhinac walba leh.
Dhanka kale qof kasta oo Alle SWT dartii u baxsaneysa sadaqo waxay la soo xiriiri karaan Telefoonka Nambarkiisu yahay +25261-6672001